Nagu saabsan | GIGALIGHT
GIGALIGHT waxaa la aasaasay 2006. Waa shirkad sumcad heer sare ah oo ku saabsan dhinaca isgaarsiinta indhaha adduunka, iyo sidoo kale hoggaamiye teknolojiyad iyo hal-abuure naqshadeysan oo ku saabsan barta xogta adduunka.
Kuweena ugu weyn products waxaa ka mid ah modules transceiver optical (oo ay ku jiraan qeexitaan sare oo fiidiyoow ah), fiilooyinka indhaha ee firfircoon (oo ay ku jiraan macaamiisha USB &HDMI iyo fiilooyinka)
The companyNidaamyada teknolojiyada 'teknoolojiyadda' waxaa ka mid ah naqshadeynta muuqaalka indhaha iyo baakadaha, silikoon naqshadeynta qalabka wax lagu duubo iyo baakadaha, barxadda teknolojiyadda isku-darka isku-dhafka ah ee 'COB', qalabka madadaalada isku-dhafka ah ee isku-dhafan ee isku-xidhka ah, iyo madal tiknoolajiyada isgaarsiinta indhaha leh.
Macaamiisha waaweyn waxaa ka mid ah shirkadaha internetka ee caalamiga ah, kuwa ka shaqeeya isgaarsiinta, kuwa iibiya qalabka isgaarsiinta, iyo kuwa isku xira nidaamka shabakadda.
Naqshadeynta Casriga ah ee Caalamiga ah ee Casriga ah
La aasaasay 2006
21 copyright software
Tirada guud ee shaqaalaha hadda jira waa ku dhawaad ​​600
Macaamiishu waxay bartilmaameed u ahayd, iskaashi firfircoon, wada shaqeyn iyo wax ku ool ah, iyo ismaandhaaf ah.
GIGALIGHT waxaa ka go'an inay horumariso 5G iyo jiilka soo socda ee xarunta isku-xirnaanta indhaha.
GIGALIGHT waxaa ka go'an soosaarka baaxadda weyn ee 100G wareejiyeyaasha muraayadaha indhaha (50,000 gogol bishii), wuxuuna dardargeliyaa horumarka 200G /400G xarumaha xogta optics, optics isku xiran, 5G qalabka wax lagu wareejiyo iyo 5G waxyaabaha caadiga ah ee istiraatiijiga ah.
GIGALIGHT waxay bilaabeen inay bixiyaan naqshadaha naqshadaha 25G / 100G iyo fiilooyinka muuqaalka firfircoon ee macaamiisha adduunka oo idil.
GIGALIGHT dhameystireen ganacsigooda 10G / 40G fiilooyinka muuqaalka firfircoon ee xarunta xogta.
GIGALIGHT suuqyada suuqa kala iibsiga ee casriga ah iyo suuqa isgaarsiinta HD-ga.
GIGALIGHT waxay bilaabeen 10G / 40G / 120G fiilooyin firfircoon oo muuqaal ah oo loogu talagalay xarunta xogta iyo codsiyada xisaabinta waxqabadka sare.
GIGALIGHT waxaa ka go'an in R&D iyo wax soo saarka qaybaha indhaha (laga bilaabo 100Mb ilaa 10Gb/s), oo dhistay suuqa kanaalka caalamiga ah ee qalabka wax lagu gudbiyo.